ချမ်းသာချင်ရင် ဒါတွေပြင် …. ချမ်းသာလိုသူတိုင်း မဖြစ်မနေဖတ်ထားသင့်လို့ ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ကြပါ – Tameelay
ချမ်းသာချင်ရင် ဒါတွေပြင် …. ချမ်းသာလိုသူတိုင်း မဖြစ်မနေဖတ်ထားသင့်လို့ ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ကြပါ
သင်ဘယ်တော့မှချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသေချာစေတဲ့အချက် (၉) ချက်
လူတိုင်းလိုလိုချမ်းသာချင်ကြပါတယ်။ ချမ်းသာအောင်လည်း အချိန်တိုင်းကြိုးစားနေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာလို့ လူတိုင်းမချမ်းသာတာလဲ။
အောက် မှာပါ အချက်တွေထဲက တစ်ချက်ချက်ကို သင်လုပ်နေပြီဆိုရင်တော့ သင်ချမ်းသာဖို့ဆိုတာ အတော်လေးကိုဖြစ်နုိုင်ချေ နည်းသွားပါပြီ။
ပိုက်ဆံ စုခြင်းက ချမ်းသာဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပုိုက်ဆံစုတာချည်းပဲ အာရုံစိုက်နေလို့ မရပါဘူး။
စုတာကိုပဲ အာရုံစိုက်နေရင် သင်လက်ရှိရနေတဲ့ ပိုက်ဆံထက်ဘယ်လို ထပ်ရှာရမလဲကို သင်စိတ်မဝင်စား နုိုင်တော့ပါဘူး။
အကယ်၍ ချမ်းသာတဲ့သူတွေလိုတွေးမယ်ဆိုရင် သင်ပိုက်ဆံကုန်သွားမှာကို စိတ်မပူသင့်တော့ပါဘူး။ ပိုက်ဆံပိုရှာနုိုင်အောင်ပဲ ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။
ပျမ်းမျှအားဖြင့် ချမ်းသာသူတွေဟာ သူတုို့ဝင်ငွေရဲ့ ၂၀%ကိုပြန်လည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံပါတယ်။ တကယ်တော့ ဘဝမှာ စောစောရင်းနှီးမြုပ်နှံနုိုင်လေ ကောင်းလေလေပါပဲ။
ဒါပေမယ့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခုပေါ်မှာ ရင်းနှီးမမြပ်နှံနုိုင်သေးရင် သင့်ကိုယ်သင်တိုးတက်အောင် အရင်ရင်းနှီး မြုပ်နှံပါ။
လစာထဲက အနည်းငယ်ကိုဖယ်ပြီး သင့်အရည်အချင်းတွေ တိုးတက်အောင် ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာ သုံးစွဲပါ။
သာမန်လူတော်တော်များများဟာ သူတို့ရဲ့အချိန်အတွက် ငွေပေးချေခြင်းကို ခံယူလိုလေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာ တစ်လ ကို ဘယ်လောက်၊
တစ်ပတ်ကိုဘယ်လောက်၊တစ်နာရီကိုဘယ်လောက်စသဖြင့်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ချမ်းသာသူတွေက တော့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရလဒ်ပေါ်မူတည်ပြီး ပိုက်ဆံ ရှာပါတယ်။
များသောအားဖြင့် သူများဆီမှာလည်း အလုပ်လုပ် လေ့မရှိပါဘူး။ သူတို့က Self-employedလို့ခေါ်တဲ့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်အလုပ်ပြန်ခန့်ထားတာမျိုးပဲလုပ်ပါတယ်။
လစာအပေါ်သာယာနေခြင်းဟာ ချမ်းသာခြင်းဆီကိုသွားရာမှာ နှောင့်နှေးစေပါတယ်။
သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တိုင်းကို လိုက်လံဖြည့်ဆည်းနေရင် သင်ဘယ်တော့မှ ချမ်းသာမှာမဟုတ်ပါဘူး။
အကယ်၍ ပုံမှန်ထက် ဝင်ငွေတိုးတက်လာရင် သင့်ကိုယ်သင် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ Lifestyleတစ်ခုကို မပြောင်းလိုက်ပါနဲ့အုံး။
ဒါဟာ ခက်ခဲတဲ့ အချက်ဖြစ်ပြီးတော်တော်များများမလုပ်နုိုင်ပါဘူး။
သန်းကြွယ် သူဌေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Grant Cardoneက”ရင်းနှီး မြုပ်နှံမှုတွေက ဝင်ငွေသေသေချာချာမဝင်သေးပဲနဲ့ ကျွန်တော်ကား အကောင်းစားမပြောနဲ့ နာရီအကောင်းစားတောင် မဝယ်ခဲ့ပါဘူး”လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။
သင်လည်း လစာတိုးတာနဲ့ iPhoneကောက်ပြီး မဝယ်ပါနဲ့အုံး။
အကယ်၍ ဘဝမှာ အောင်မြင်ချင်ရင် မိမိလုပ်နေတာကို အရင်ဆုံး ချစ်မြတ်နိုးဖို့လိုပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် သင်ဘာကိုချစ် မြတ်နိုးတယ်ဆိုတာလည်း သိဖို့လိုသလို အိမ်မက်တွေနောက်ကို လုိုက်ရဲတဲ့ သတ္တိလည်းရှိဖုိ့လိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လူ တော်တော်များများကတော့ မိဘရဲ့ရည်မှန်း ချက်နောက်ကိုလိုက်နေ တာများပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ရင် လက်ရှိဝင်နေတဲ့ လစာလေး မဝင်တော့မှာ စိုးရိမ်ကြတာများပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ သူများအိမ် မက်တွေကိုပုံဖော်ပေးရင်းနဲ့ပဲ သင့်ဘဝကုန်ဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ ဘဝမှာချမ်းသာချင်ရင် စွန့်စားရဲတဲ့သတ္တိ ရှိရပါတယ်။ သက်တောင်သက်သာ ရှိတဲ့နေရာမှာပဲ နေထိုင်နေရုံနဲ့တော့ မချမ်းသာလာပါဘူး။
အကယ်၍ ချမ်းသာချင်တယ်ဆိုရင် ပိုက်ဆံ ကို ဘယ်လိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချရမယ်ဆိုတာ သိဖို့လိုပါတယ်။ သင်ရလာတဲ့ ဝင်ငွေကို ဘယ်နေရာတွေမှာသုံးမယ်။
ဘယ်လောက်ကိုစုမယ်၊ ဘယ်လောက်ကိုရင်းနှီးမြုပ်နှံရမှာသုံးမယ် စသဖြင့်သေ သေချာချာသိဖို့လိုပါတယ်။
သင်က လစာရတာနဲ့ ဘာတွေသုံးရမလဲ စစဉ်းစားပါတယ်။ ပြီးမှလကုန်လို့ ကျန်တာကိုစုတယ်ဆိုရင်တော့ သေချာပါ တယ်။
သင့်မှာ ဘာမှကျန်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျန်လည်း နည်းနည်းပါပဲ။ တကယ်တော့ အရင်စုပြီးမှ ပိုတာကို သုံးရမှာ ပါ။
ဝင်ငွေ၁၀%ကိုဖြစ်ဖြစ်စုပါ။ ပြီးမှပိုတာကို ဘာတွေသုံးမလဲ စဉ်းစားပါ။
လူတော်တော်များများက ချမ်းသာခြင်းဆိုတာ ကံကောင်းတဲ့သူတွေဆီကိုပဲ ရောက်ရှိလေ့ရှိတဲ့အရာလို့ ခံယူထားပါ တယ်။
ဒါ့ကြောင့်လည်း အဲ့ဒိလူတော်တော်များများက ဘယ်တော့မှ မချမ်းသာပါဘူး။
မိမိကိုယ်ကိုမှ မယုံရင် ဘာမှ လုပ်လို့မရပါဘူး။ ကြိုးစားသူတိုင်း အတွက်နေရာ ရှိပါတယ်။ သင့်အတွက်လည်းနေရာရှိပါတယ်။
Credit : မိုးရှင်း ( I.M.T )
စာဖတ်ခြင်းဖြင့် ပညာ ဗဟုသုတ တိုးပွားနိုင်ကြပါစေ …
သငျဘယျတော့မှခမျြးသာမှာမဟုတျဘူးဆိုတာသခြောစတေဲ့အခကျြ (၉) ခကျြ
လူတိုငျးလိုလိုခမျြးသာခငျြကွပါတယျ။ ခမျြးသာအောငျလညျး အခြိနျတိုငျးကွိုးစားနကွေပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘာလို့ လူတိုငျးမခမျြးသာတာလဲ။
ဒါပမေယျ့ တကယျတော့မဟုတျ ပါဘူး။ မခမျြးသာရခွငျး အကွောငျးအရငျးကတော့ အခွခေံလိုအပျခကျြ လေးတှကေိုတောငျ မပွုပွငျနုိုငျလို့ပါ။
အောကျ မှာပါ အခကျြတှထေဲက တဈခကျြခကျြကို သငျလုပျနပွေီဆိုရငျတော့ သငျခမျြးသာဖို့ဆိုတာ အတျောလေးကိုဖွဈနုိုငျခြေ နညျးသှားပါပွီ။
(၁)သငျဟာ ပိုကျဆံ စုခွငျးကို အရမျးဝါသနာပါပွီး ပိုကျဆံပိုမရှာနုိုငျဘူး။
ပိုကျဆံ စုခွငျးက ခမျြးသာဖို့ကွိုးစားတဲ့နရောမှာ အရေးကွီးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပုိုကျဆံစုတာခညျြးပဲ အာရုံစိုကျနလေို့ မရပါဘူး။
စုတာကိုပဲ အာရုံစိုကျနရေငျ သငျလကျရှိရနတေဲ့ ပိုကျဆံထကျဘယျလို ထပျရှာရမလဲကို သငျစိတျမဝငျစား နျုိုငျတော့ပါဘူး။
အကယျ၍ ခမျြးသာတဲ့သူတှလေိုတှေးမယျဆိုရငျ သငျပိုကျဆံကုနျသှားမှာကို စိတျမပူသငျ့တော့ပါဘူး။ ပိုကျဆံပိုရှာနုိုငျအောငျပဲ ဂရုစိုကျသငျ့ပါတယျ။
ပမျြးမြှအားဖွငျ့ ခမျြးသာသူတှဟော သူတုို့ဝငျငှရေဲ့ ၂၀%ကိုပွနျလညျရငျးနှီးမွုပျနှံပါတယျ။ တကယျတော့ ဘဝမှာ စောစောရငျးနှီးမွုပျနှံနုိုငျလေ ကောငျးလလေပေါပဲ။
ဒါပမေယျ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးတဈခုခုပျေါမှာ ရငျးနှီးမမွပျနှံနျုိုငျသေးရငျ သငျ့ကိုယျသငျတိုးတကျအောငျ အရငျရငျးနှီး မွုပျနှံပါ။
လစာထဲက အနညျးငယျကိုဖယျပွီး သငျ့အရညျအခငျြးတှေ တိုးတကျအောငျ ပွုလုပျတဲ့နရောမှာ သုံးစှဲပါ။
(၃) တညျငွိမျတဲ့လစာဝငျငှပေျေါမှာ သငျသာယာနတေယျ။
သာမနျလူတျောတျောမြားမြားဟာ သူတို့ရဲ့အခြိနျအတှကျ ငှပေေးခခြွေငျးကို ခံယူလိုလရှေိ့ပါတယျ။ ဥပမာ တဈလ ကို ဘယျလောကျ၊
တဈပတျကိုဘယျလောကျ၊တဈနာရီကိုဘယျလောကျစသဖွငျ့ပေါ့။ ဒါပမေယျ့ ခမျြးသာသူတှကေ တော့ ဖွဈပျေါလာတဲ့ရလဒျပျေါမူတညျပွီး ပိုကျဆံ ရှာပါတယျ။
မြားသောအားဖွငျ့ သူမြားဆီမှာလညျး အလုပျလုပျ လမေ့ရှိပါဘူး။ သူတို့က Self-employedလို့ချေါတဲ့ ကိုယျ့ဘာသာကိုယျအလုပျပွနျခနျ့ထားတာမြိုးပဲလုပျပါတယျ။
လစာအပျေါသာယာနခွေငျးဟာ ခမျြးသာခွငျးဆီကိုသှားရာမှာ နှောငျ့နှေးစပေါတယျ။
သငျ့ရဲ့လိုအပျခကျြတိုငျးကို လိုကျလံဖွညျ့ဆညျးနရေငျ သငျဘယျတော့မှ ခမျြးသာမှာမဟုတျပါဘူး။
အကယျ၍ ပုံမှနျထကျ ဝငျငှတေိုးတကျလာရငျ သငျ့ကိုယျသငျ ပိုမိုကောငျးမှနျတဲ့ Lifestyleတဈခုကို မပွောငျးလိုကျပါနဲ့အုံး။
ဒါဟာ ခကျခဲတဲ့ အခကျြဖွဈပွီးတျောတျောမြားမြားမလုပျနုိုငျပါဘူး။
သနျးကွှယျ သူဌေးတဈယောကျဖွဈတဲ့ Grant Cardoneက”ရငျးနှီး မွုပျနှံမှုတှကေ ဝငျငှသေသေခြောခြာမဝငျသေးပဲနဲ့ ကြှနျတျောကား အကောငျးစားမပွောနဲ့ နာရီအကောငျးစားတောငျ မဝယျခဲ့ပါဘူး”လို့ဆိုခဲ့ပါတယျ။
သငျလညျး လစာတိုးတာနဲ့ iPhoneကောကျပွီး မဝယျပါနဲ့အုံး။
(၅) သငျဟာ သငျ့အိမျမကျနောကျကိုလိုကျရဲတဲ့ သတ်တိမရှိဘူး။
အကယျ၍ ဘဝမှာ အောငျမွငျခငျြရငျ မိမိလုပျနတောကို အရငျဆုံး ခဈြမွတျနိုးဖို့လိုပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ သငျဘာကိုခဈြ မွတျနိုးတယျဆိုတာလညျး သိဖို့လိုသလို အိမျမကျတှနေောကျကို လုိုကျရဲတဲ့ သတ်တိလညျးရှိဖုိ့လိုပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ လူ တျောတျောမြားမြားကတော့ မိဘရဲ့ရညျမှနျး ခကျြနောကျကိုလိုကျနေ တာမြားပါတယျ။
(၆) သငျဟာ Comfort Zoneထဲက မထှကျရဲဘူး။
ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးလုပျရငျ လကျရှိဝငျနတေဲ့ လစာလေး မဝငျတော့မှာ စိုးရိမျကွတာမြားပါတယျ။
ဒီလိုနဲ့ သူမြားအိမျ မကျတှကေိုပုံဖျောပေးရငျးနဲ့ပဲ သငျ့ဘဝကုနျဆုံးသှားပါလိမျ့မယျ။
အကယျ၍ ဘဝမှာခမျြးသာခငျြရငျ စှနျ့စားရဲတဲ့သတ်တိ ရှိရပါတယျ။ သကျတောငျသကျသာ ရှိတဲ့နရောမှာပဲ နထေိုငျနရေုံနဲ့တော့ မခမျြးသာလာပါဘူး။
(၇) သငျ့ပိုကျဆံတှကေို ဘယျလိုအသုံးခမြယျဆိုတာ ကွိုတငျပွငျဆငျထားခွငျး မရှိဘူး။
အကယျ၍ ခမျြးသာခငျြတယျဆိုရငျ ပိုကျဆံ ကို ဘယျလိုအကြိုးရှိရှိအသုံးခရြမယျဆိုတာ သိဖို့လိုပါတယျ။ သငျရလာတဲ့ ဝငျငှကေို ဘယျနရောတှမှောသုံးမယျ။
ဘယျလောကျကိုစုမယျ၊ ဘယျလောကျကိုရငျးနှီးမွုပျနှံရမှာသုံးမယျ စသဖွငျ့သေ သခြောခြာသိဖို့လိုပါတယျ။
သငျက လစာရတာနဲ့ ဘာတှသေုံးရမလဲ စစဉျးစားပါတယျ။ ပွီးမှလကုနျလို့ ကနျြတာကိုစုတယျဆိုရငျတော့ သခြောပါ တယျ။
သငျ့မှာ ဘာမှကနျြမှာမဟုတျပါဘူး။ ကနျြလညျး နညျးနညျးပါပဲ။ တကယျတော့ အရငျစုပွီးမှ ပိုတာကို သုံးရမှာ ပါ။
ဝငျငှေ၁၀%ကိုဖွဈဖွဈစုပါ။ ပွီးမှပိုတာကို ဘာတှသေုံးမလဲ စဉျးစားပါ။
(၉) သငျကခမျြးသာခွငျးဆိုတာ မဖွဈနုိုငျပါဘူးလို့ထငျနတေယျ။
လူတျောတျောမြားမြားက ခမျြးသာခွငျးဆိုတာ ကံကောငျးတဲ့သူတှဆေီကိုပဲ ရောကျရှိလရှေိ့တဲ့အရာလို့ ခံယူထားပါ တယျ။
ဒါ့ကွောငျ့လညျး အဲ့ဒိလူတျောတျောမြားမြားက ဘယျတော့မှ မခမျြးသာပါဘူး။
မိမိကိုယျကိုမှ မယုံရငျ ဘာမှ လုပျလို့မရပါဘူး။ ကွိုးစားသူတိုငျး အတှကျနရော ရှိပါတယျ။ သငျ့အတှကျလညျးနရောရှိပါတယျ။
အကယျ၍ အထကျပါအခကျြတှထေဲက တဈခကျြခကျြ သငျ့မှာရှိနပွေီဆိုရငျတော့ သငျပွငျဆငျသငျ့ပါပွီ။အကယျ၍ ခမျြးသာခငျြတယျဆိုရငျပေါ့။
Credit : မိုးရှငျး ( I.M.T )
စာဖတျခွငျးဖွငျ့ ပညာ ဗဟုသုတ တိုးပှားနိုငျကွပါစေ …
လူတစ်ယောက်ကို ချစ်မိတာ သင့်အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ သူက သင့်ကိုပြန်မချစ်နိုင်ဘူး ဆိုရင်လည်း သူ့အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ လူတစ်ယောက်ကို သင့်အနေနဲ့ အပြည့်အဝချစ်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလိမ့်မယ်လို့ တွေးထားရင်တော့ ခံစားရမှာပါ။ သင့်ကိုယ်သင်တောင် မပိုင်ပါဘူး။ သင့်ကို မချစ်နိုင်တဲ့သူကို မေ့ပြစ်ဖို့ ကြိုးစားမနေပါနဲ့။ ပိုပြီးသတိရစေပါတယ်။ ရယူပိုင်ဆိုင်လိုစိတ်မရှိဘဲ ချစ်လိုက်ပါ။ ကြာလာရင်သူ့ကို မေ့လာမှာပါ။ …
လူနေချုံကြား၊ စိတ်နေဘုံဖျား ကြီးကြီးတွေးမယ်။ မြင့်မြင့်တက်မယ်။ ဝေးဝေးကြည့်မယ်။
ကိုယ့်အမြင်တစ်ခုတည်းနဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို အဆုံးအဖြတ်ပေးခဲ့ရင် ဘယ်အရာမှ သိပ်ပြည့်စုံမှာ မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ့်သဘောထားတစ်ခုတည်းနဲ့ သူများကို သွားတိုင်းရင် ဘယ်သူမှ သိပ်ပြည့်စုံမှာ မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ့်အလိုတစ်ခုတည်းနဲ့ သူများကို သွားတောင်းဆိုခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမှ သိပ်အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ပါဘူး မျက်စိသာ ပေတံလို သဘောထားခဲ့ရင် သူများကို မတိုင်းတာခင်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင်တိုင်းကြည့်ပါ။ …
ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ ကြည့်ကောင်းနေစေဖို့အတွက် ကျင့်သုံးရမယ့် အချက် (၁၁) ချက် သူများတွေပြောတဲ့ ဓာတ်ပုံစားတယ်၊ ဓာတ်ပုံစားတယ်ဆိုတာဟာ အပြင်မှာထက် ဓာတ်ပုံထဲမှာ ပိုချစ်ဖို့ကောင်းတာ၊ ပိုကြည့်ကောင်းတာမျိုးကို ပြောချင်တာပါ။ တစ်ခါတစ်လေ ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ တောင့်တောင့်တင်းတင်းကြီး ဖြစ်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ အပြင်မှာ ကြည့်ကောင်းနေရင်တောင် ဓာတ်ပုံထဲလည်းရောက်ရော အနေအထားမကျ မျက်နှာတည်တည်တင်းတင်းကြီးတွေ ဖြစ်နေရော။ …